I-ILIFE A11, enye into eneempawu ezininzi kunye nexabiso elihle [Uphononongo] | Izixhobo zeNdaba
I-ILIFE A11, enye indlela enezinto ezininzi kunye nexabiso elihle [Hlola]
UMiguel Hernandez | 25/03/2022 22:38 | Ukuhlaziywa ukuba 25/03/2022 22:40 | ngokubanzi, Reviews
UBOMI unosapho lwezicoci zerobhothi kunye nezinye iintlobo zezixhobo ezenzelwe ukusinceda ngemisebenzi yethu yasekhaya, ngenxa yokwenziwa kwazo okuhle kunye nokusebenza kwazo, zibe ngumgangatho weshishini, isalathiso esihle xa ujonge ubudlelwane phakathi komgangatho kunye nomgangatho. ixabiso.
Kwenzeka njani ukuba ngenye indlela, Kungaba njani ngenye indlela, sikulethela uhlalutyo olunzulu lwe-ILIFE A11 entsha, i-robot vacuum cleaner eneempawu eziphezulu kunye nexabiso eliphakathi. Fumana kunye nathi zonke iimpawu zale ILIFE A11 kwaye kutheni ibekwe njengenye indlela enomdla kakhulu kwimarike.
1 Uyilo kunye nezixhobo: Ekuphakameni kweprimiyamu
2 Iimpawu zobugcisa
3 Iindlela zokucoca kunye ne-2-in-1 inkqubo
4 Uluvo lomhleli
Uyilo kunye nezixhobo: Ekuphakameni kweprimiyamu
Ngokubhekiselele kuyilo, i-ILIFE igqibe ekubeni iqhubeke nokugcina iipatheni zayo zokuyila, eziye zabelwana ngobuninzi bezixhobo zolu hlobo. Kule meko sijongene nesixhobo se 350 x 350 x 94,5 millimeters kubunzima bubonke obungaphezu kwe-3,5 kilogram, phakathi kwemigangatho yoshishino.
Kwinxalenye engezantsi, kukho amavili amabini ane-cushioning, ivili le-multidirectional ngaphambili kunye ne-roller edibeneyo ye-silicone kunye neebhulashi ze-nylon ukunika ukucoca ngokucokisekileyo kuzo zonke iintlobo zeendawo. Indawo yangasemva yenkqubo yokudibanisa i-mop kunye nebrashi enye ejikelezayo kwindawo ephezulu ekhohlo. Ngaphezu kokwaneleyo.
Ngaba unomdla wokuthenga i-ILIFE A11? ngoku ungakwazi fumana elona xabiso lilungileyo ukusuka apha
Phezulu sine-sensor ye-LiDAR eyalela isixhobo, amaqhosha amabini e-ON / OFF kwaye abuyele kwisikhululo sokutshaja kunye nomphezulu omnyama wepiyano oya kuvuyisa abalandeli bothuli kunye neminwe. Akukho eccentricity ngaphaya inkqubo yayo yokutshaja ekhethekileyo.
Bucala ngasekhohlo, kude nokuba nezikhonkwane kumazantsi esixhobo, ibekwe ngaphambili ezinezowuni ezimbini ezinde zesinyithi eziya kuthi zingqamane nezilingana nazo kwisiseko sokutshaja, eziqhagamshelwe kumsinga wombane. Andazi impembelelo enokuthi le nto ibe nayo kwinqanaba lomngcipheko wombane, ngokunyanisekileyo, ndikhetha izikhonkwane zakudala ezibekwe kwisiseko sesixhobo.
Le ILIFE A11 inesiqinisekiso se-ROHS kunye namandla okufunxa aphezulu ukuya kuthi ga 4.000 Pa kuxhomekeke kwindlela yokucoca esiyikhethileyo. Ukwenza oku, ixhotyiswe ngebhetri eyi-5.200 mAh esinika ukucoca malunga nemizuzu eyi-180. ngeyona ndlela yoqoqosho yokufunxa. Asikwazanga ukuqinisekisa oku kugqithiseleyo kuba ubungakanani bendlu esetyenziselwa ukuphononongwa buncinci kakhulu kumandla okucoca i-ILIFE A11, oko kukuthi, asikwazanga ukukhupha ngaphezu kwe-50% yebhetri yayo.
Sinenkqubo yokwenza imephu enemigangatho emininzi
Ineteknoloji I-LiDAR 2.0 eyenza imephu enika umdla kakhulu kwaye ikhawulezayo, iba rhabaxa 3.000 iisampulu ngesekhondi kuluhlu oluphezulu lweemitha ezi-8. I-algorithm ye-CV-Slam ibonise iziphumo ezilungileyo kuhlalutyo olwenziwayo, imiqobo yokwenza imephu efana neebhedi, iisofa kunye neetafile kakuhle. Njengokucocwa kwesibini, kuphucula kakhulu ukusebenza kunye nokukhawulezisa inkqubo ngendlela ezimeleyo, into exabiswa kakhulu kumgangatho, apho isixhobo asinakushiywa kwizixhobo zayo.
Iindlela zokucoca kunye ne-2-in-1 inkqubo
Sigxininisa inyani yokuba i-ILIFE iqinisekisa ukuba kwimodeli ye-A11 sinenyani yokwenyani ezimbini-kwinye yokukhuhla kunye nenkqubo yokucoca. Nangona oku kuyinyani ekufuneka siyicacise, sinetanki enye yamanzi kunye nokungcola, I-500ml yenkunkuma kwaye kuphela (kodwa yanele) i-200 yamanzi. Kule meko, iyamangalisa into yokuba inenkqubo "yokukhuhla" elinganisa umthambo wezandla ngokushukuma kancinane, oku kuyenza isebenze ngakumbi kwaye inqande inkungu. Nangona kunjalo, njengoko ndihlala nditsho, ezi mops zenzelwe ukunika i-parquet okanye imigangatho yeplanga, kwaye zihambelana kakubi kakhulu nemigangatho ye-ceramic apho ishiya inkitha yamanqaku amanzi.
Itanki yokungcola: 500ml
I-Tank edibeneyo: 300ml + 200ml
Iyakwazi ukugungxula kunye nokucoca ngaxeshanye, siza kuyihlengahlengisa ngesicelo sayo esiphathwayo. Kule, Isimahla kuzo zombini i-Android kunye ne-iOS sinokungqamanisa i-ILIFE A11 kwaye siyidibanise ne-Alexa, Umncedisi weAmazon wenyani wokuthobela imiyalelo yethu echanekileyo malunga nemisebenzi yokucoca.
Emva koko, sinendlela ephindwe kabini yokusetyenziswa kwesandla, ngolawulo olucwangcisiweyo olubandakanyiweyo kunye nesixhobo, kunye nenkqubo yokulawula ebonakalayo efakwe kwisicelo. Nje ukuba siskene indlu yonke siya kukwazi uku:
Misela inkqubo yokucoca indawo
Yenza iishedyuli zokucoca
Yenza ukucocwa kweziphelo okanye "Indlela yeSpot"
Phakathi kweminye imisebenzi eqhelekileyo, enje ngokuba nokwenzeka kokulungelelanisa amandla amathathu okufunxa.
Nangona kunjalo, asinalo ulwazi oluchanekileyo malunga needecibels phakathi kwazo oku ULIFE A11, nangona kunjalo, ikude ukuba ibe yenye yezona zithuleyo kwimarike. Nangona kunjalo, inayo inkqubo yokucoca "ethe cwaka" enciphisa amandla, kodwa ngenxa yezizathu ezicacileyo, ikwanciphisa kakhulu ingxolo ekhutshwayo.
Este I-ILIFE A11 ixabisa i-euro ezingama-369 njengomgaqo jikelele, nangona kukho unikezelo oluninzi kwi-AliExpress, kunye nokuthumela ngenqanawa kwindawo yakho, oko kuya kukuvumela ukuba uyonwabele ngexabiso elilungelelanisiweyo. Esi sesinye isizathu sokuba uhlale ukhumbula ukuba le ILIFE A11 yenye indlela ezele ziimpawu eziphezulu ngexabiso eliphakathi kuluhlu oluphakathi. Sele uyazi ukuba amandla okukhuhla njengomgaqo jikelele akude kulawo anikezelwa ziinkqubo zokukhuhla ngesandla, kodwa. ukufunxa, ukuskena kwe-3D kunye namandla ayo okufunxa kuyenza ibe lukhetho olunika umdla kakhulu.
Inqanaba leenkwenkwezi ezi-4.5
Uphengululo lwe: UMiguel Hernandez
Ithunyelwe nge: 25 Matshi we2022
Utshintsho lokugqibela: 25 Matshi we2022
Ukuthwala (ubungakanani / ubunzima)
Izixhobo kunye noyilo
Inkqubo yokutshaja engaqhelekanga
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-ILIFE A11, enye indlela enezinto ezininzi kunye nexabiso elihle [Hlola]
I-SPC Smart Ultimate, ukhetho lokwenyani olunoqoqosho kakhulu
Ungazisusa njani iintsholongwane kwiMac yakho